ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများနှင့်အလုပ်အကိုင်များ | USAHello ကနေအလုပ်အရင်းမြစ်များ | USAHello
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုလေ့လာပါ. သငျသညျကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ယူနိုင်ပါသည်ကွဲပြားခြားနားသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလမ်းခရီးအကြောင်းကို Read. သင်လိုအပ်သောအရာကိုလေ့ကျင့်ရေးထွက်ရှာဘယ်မှာသင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေမှုကိုစတင်ရန်.
သွားဘက်ဆိုင်ရာလက်ထောက် - သွားဘက်ဆိုင်ရာလက်ထောက်တစ်ဦးပါးစပ်တွင်းရုံးအတွက်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်အခြေခံလူနာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုပြုပါ. ဥပမာ, တစ်ဦးပါးစပ်တွင်းလက်ထောက်ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးအတှကျစိတျရှညျရှညျကိုပွငျဆငျစခွေငျးငှါသို့မဟုတ်သူဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ရုံးများအတွက်လူနာမှတ်တမ်းများစည်းရုံးရေးတာဝန်ခံဖြစ်နိုင်သည်. လေ့ကျင့်ရေးဖြည့်စွက်ဖို့နှစ်နှစ်မှကိုးလကနေဘယ်နေရာမှာမဆိုယူနိုင်ပါသည်, ကလက်မှတ်င်ရှိမရှိအပေါ်မူတည်, ဒီပလိုမာသို့မဟုတ်ဘွဲ့. ရှာတွေ့သည် မှတ်ပုံတင်သွားလက်ထောက်ဖြစ်လာဖို့ဘယ်လို.
ကနျြးမာရေးသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာရှင် - တစ်ဦးကကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာရှင် (HIT အမျိုးအစား) ဘေးကင်းလုံခြုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများစောင့်ရှောက်, တိကျမှု, ထယနေ့အထိ. အားလုံးနီးပါးကဤမှတ်တမ်းများကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်ထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း. ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအတွက်အလုပ်လုပ်နေလူအများစုဟာကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆက်စပ်လယ်ပြင်၌ရှိသောတွဲဖက်ရဲ့ဒီဂရီကိုင်. ရှာတွေ့သည် ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာရှင်ဖြစ်လာဖို့ဘယ်လို.
သငျသညျအထကျကိုမွငျလြှငျအဖြစ်, အမြားအပွားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်လေ့ကျင့်ရေးအချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါတယ်. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အကြိုးဖြစ်ကြပြီးမကြာခဏကောင်းမွန်စွာပေးဆောင်နေချိန်တွင်, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပရော်ဖက်ရှင်နယ်မကြာခဏစိတ်ဖိစီးမှုတွေအများကြီးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, အချိန်ကတိကဝတ်, နှင့်တာဝန်ယူမှု. သငျသညျကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သင့်ရဲ့ရေရှည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်လိုလျှင်ဤအမှုအရာကိုစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါတယ်. သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် ဖတ်ပြီးသား6ကနျြးမာရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရွေးချယ်ရာတွင်မတိုင်မီစဉ်းစားရန်အမှုအရာ သို့မဟုတ် ကျောင်းသားများနှင့်လူကြီးများအတွက်ကျန်းမာရေးကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစမ်းသပ်မှုယူ.
သငျသညျသေချာမသိကြပါလျှင်အဘယ်အရာကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအများဆုံးအကျိုးစီးပွားသငျသညျ, အနာဂတျမှာကြီးထွားလတံ့သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ဒေသများတွင်စဉ်းစား. ဥပမာ, နည်းပညာနှင့်အကွီးအကဲစောင့်ရှောက်မှုဒေသများကြီးထွားလာနေကြတယ်. သင်ရွေးချယ်မည်သို့ပင်လယ်ပြင်, သငျသညျဖြစ်ကောင်းလေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်ပါလိမ့်မည်, လက်မှတ်ပေးခြင်း, သို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး.
သငျသညျအဘယျသို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသိလျှင်သင်တို့အထဲ၌စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်, အလုပ်လိုအပ်ချက်မှာကြည့် လိုအပ်ချက်များအပေါ်ကြောင်း career.Depending များအတွက်, သငျသညျအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်သို့မဟုတ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျောင်းတက်နိုင်ပါတယ်, လေးနှစ်တက္ကသိုလ်ကိုသွား, သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းလေ့လာ.
သင်သည်သင်၏အထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာရရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင်၏ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်သင့်. ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ GED® ပြင်ဆင်မှုအစီအစဉ်ကို သင်တစ်ဦးအထက်တန်းကျောင်းအထောက်အထားများရရှိရန်ကူညီပေးပါမည်.
ရပ်ရွာကောလိပ်များနှင့်နည်းပညာကျောင်းများနှစ်နှစ်ဒီဂရီများနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအလုပ်အကိုင်များအမျိုးမျိုးတို့ကိုများအတွက်သင်တန်းကိုတက်ရောက်ရန်ကမ်းလှမ်း. သင်လုပ်နိုင်သည် သငျသညျအနီးအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်ကိုရှာဖွေ.
ယောဘသည် Corps အစိုးရအစီအစဉ်ကိုကမ်းလှမ်းမှုအခမဲ့ပညာရေးနှင့်လုလင်တို့နှင့်အမျိုးသမီးအသက်အရွယ်မရွေးဖို့သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းပေးခြင်းဖြစ်ပါသည် 16 သို့ 24. ယောဘသည် Corps လေ့ကျင့်ရေးကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အပါဝင်သည်: CNA, သွားဘက်ဆိုင်ရာလက်ထောက်, ဆေးဆိုင်နည်းပညာရှင်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလက်ထောက်, ကနျြးမာရေးယူနစ်ညှိနှိုင်းရေးမှူး, နှင့်လိုင်စင် / သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသူနာပြု.
သင့်ဒေသခံအလုပ်အကိုင်စင်တာကိုသုံးပါ: ခပ်သိမ်းသောမြို့အတွက်အစိုးရအလုပ်အကိုင်စင်တာများအခမဲ့များမှာ. သူတို့ကအကြံဉာဏ်ကိုပူဇော်နှင့်ဒေသခံအလုပ်အကိုင်များများစာရင်းကိုစောင့်ရှောက်. သူတို့ကကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့အလုပ် applications များနှင့်အတူကူညီ. သူတို့ဟာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအလုပ်သင်တန်းနှင့်ပညာရေးရန်သင့်အားဆက်သွယ်နိုင်သည်. Find သင့်ရဲ့အနီးဆုံးအလုပ်အကိုင်စင်တာ.
အွန်လိုင်းကိုကွညျ့ရှု: ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အတော်ကြာဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏တဦးတည်းအွန်လိုင်းစာရင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အကြောင်း.
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များ Check: သငျသညျအလုပျချင်ပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်နေရာများဝက်ဘ်ဆိုက်များမှာအွန်လိုင်းကိုကြည့်.